Horudhac: Brighton vs Man City… (Wacdaraha Brighton oo laga cabsi qabo inuu waji-gabax u saariyo Pep Guardiola) – Gool FM
(Brighton & Hove) 23 Okt 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa markii ugu horreysay horyaalka Premier League hoggaan u qaban karta toddobaadkan haddii ay guuldarreystaan Chelsea iyo Liverpool iyaduna ay guul ka gaarto kooxda Brighton & Hove Albion.
Man City ayaa Brighton kula balansan ciyaar ka tirsan horyaalka Ingiriiska caawa iyadoo kooxda hooseysa ay heysato fursad ay kaga yaabin karto kooxaha waaweyn haddii ay galabta guul ka gaarto kulankaas taasoo siin karta inay ka sara maraan difaacdayaasha.
Labada naadi ayaa ku kala jira booska saddexaad iyo booska afaraad ee kala sarreynta Premier League haatan waxaana labo dhibcood sarreysa naadiga martida ah oo leh 17 dhibcood halka Brighton ay leedahay 15 dhibcood.
Xiddiga difaaca ka ciyaara ee Adam Webster ayaa shaki laga gelinayaa inuu u safan karo kooxdiisa Brighton kulanka caawa, halka ay guud ahaan kulankan seegi doonaan Steven Alzate iyo Danny Welbeck kuwaasoo dhaawacyo waqti dheer ku maqan.
Geesta kale, kaliya weeraryahanka Isbaanish-ka ah ee Ferran Torres ayaa ka maqnaan doona kooxda Manchester City taasoo ka dhigan inuusan Macallin Pep Guardiola ka fikireyn dhaawacyo cusub.
Naadiga Brighton ayaa kasoo kabatay 2-0 iyadoo saddex 3-2 ku garaacday Man City kulankan oo kale xilli ciyaareedkii hore.
Guushaas waxay soo af-jartay toddobo guuldarro oo xiriir ah oo ay The Seagulls kala kulantay kooxda uu hoggaamiyo Guardiola ciyaaraha Premier League.
Brighton ayaa guuldaro la’aan ah shanteedii kulan ee ugu dambeysay Premier League inkastoo ay barbarro gashay saddexdii ugu dambeysay oo dhan.
Kooxda lagu naaneyso The Seagulls ayaa ah kooxda jaalleyaasha ugu badan loo taagay horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan iyadoo ay qaateen ciyaartoydeeda 22 kaar oo digniin ah.
Neal Maupay ayaa dhaliyay afar ka mid ah siddeedda gool ee ay Brighton ka dhalisay horyaalka xilli ciyaareedkan, hase ahaatee, waxa uu ku guuldarreystay inuu xitaa sameeyo hal darbo saddexdiisii ciyaarood ee ugu dambeysay oo uu wajahay Man City.
Manchester City ayaa la kulantay labo guuldarro shantii ciyaarood ee ugu dambeysay bannaanka kulammada horyaalka Premier League iyadoo gaartay kaliya labo guul midna barbarro gashay.
Citizens ayaanan wax gool ah laga dhalin horyaalka qaybta hore ee tobankii ciyaarood ee lasoo dhaafay.
Man City ayaa 11 gool-dhaliye oo kala duwan ku leh Premier League xilli ciyaareedkan, hase ahaatee, ma jiro xiddig wax ka badan labo gool ka dhaliyay horyaalka.
Horudhac: Chelsea vs Norwich... (Blues oo weeraryahan la'aan oo wajaheysa koox aanan wali hoggaan u qaban kulan ka tirsan horyaalka)